Etu ị ga - esi mekota Usoro Ọdịnaya Gị na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Tọzdee, Machị 28, 2013 Monday, June 10, 2013 Jayson DeMers
Afọ nke Ọdịnaya Ọdịnaya
Ọ bụ afọ “atụmatụ ọdịnaya”Na“ ahia ahia. ” N'ebe ọ bụla ị tụgharịrị, oge na-aga, nke ahụ bụ ihe ị ga-anụ. N'ikwu eziokwu, ọdịnaya abụrụla akụkụ bụ isi nke ịzụ ahịa n'ịntanetị kemgbe mmalite nke njikarịcha njin ọchụchọ. Site na mmelite Google algorithm na nso nso a, agbanyeghị, dịka Panda na Penguuin, usoro nhazi ihe siri ike aghọwo ihe dị mkpa karị.
Ọdịnaya ejiri rụọ ọrụ ebube maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, anyị anaghị ekwu maka ọdịnaya nke weebụsaịtị ebe a. Anyị na-ele anya nke ọma, ejiri ngwongwo rụọ ọrụ, na ịkọwapụta-maka mmekọrịta-mmekọrịta-ịdị mma ọdịnaya nke na-eme ihe maka nnukwu ụdị na obere ọchụnta ego.
Atụmatụ ọdịnaya dị ndụ ma na-egwu maka weebụsaịtị. Ọ bụ ihe ọtụtụ isiokwu SEO blọgụ na-elekwasị anya, mana ọtụtụ ndị m na-ahụ - ndị mmadụ na-etinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta - anaghị eme atụmatụ atụmatụ ọdịnaya maka ọwa mmekọrịta ha. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ na-elekarị mgbasa ozi ọha na eze anya dị ka ndị na-enweghị ihe pụrụ iche, nke a na-akwakọba (nke sitere na nkwenye na mgbasa ozi ọha na eze bụ maka "ịkekọrịta" ọdịnaya achọtara n'ebe ọzọ), ọ nwere ike ịrụ ọrụ ebube maka mgbasa ozi / mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla.
Strategy ọdịnaya maka Social Media? Ị na-egwu egwu?
Itinye aka na atụmatụ dị mma maka weebụsaịtị siri ike; E kwuwerị, ọ na-ewe ọtụtụ ihe iji mepụta ederede ọdịnaya maka blog dị mfe. Kedu ihe kpatara mmadụ ga - eji wepụta oge (ma eleghị anya ego) maka ọdịnaya iji gaa na mgbasa ozi mmekọrịta? Ọ bụ na anyị agaghị aga ịkekọrịta njikọ na eserese?
Akụkụ buru ibu nke mgbasa ozi mgbasa ozi gị ga-abụrịrị ịkekọrịta ọdịnaya na-atọ ụtọ ma dị mkpa, na-ezipụ ọnọdụ ma ọ bụ tweets na-enyere ndị ọrụ aka, na-etinye ndị na-agụ akwụkwọ / ndị na-eso ụzọ, wdg. ihe. E nwere ihe a atụmatụ ego nke atụmatụ aka; ma e wezụga nanị atụmatụ, e nwere “ọdịnaya atụmatụ” ọbụna maka na-elekọta mmadụ media. Ihe ato kacha dị mkpa maka otu mgbasa ozi mgbasa ozi gị si arụ ọrụ nke ọma:
Ebumnuche nke mgbasa ozi mmekọrịta abụghị naanị iji kpokọta akara ngosi mmekọrịta maka Google, ọ bụ ezie na nke ahụ dị ezigbo mkpa. Ọ bụghị naanị ịkwọ ụgbọala pịa, ma. Nke kachasị, ejirila naanị atụmatụ ọdịnaya nweta ozi mgbasa ozi "na-arụ ọrụ".
Mgbasa mgbasa ozi kwesịrị ịchụpụ aka. Nke a na - eme ka mmata dị elu, ewu ewu na ntụkwasị obi. Ihe a niile, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, dabere na atụmatụ ọdịnaya mgbasa ozi gị.
Kedu ihe bụ ezigbo usoro afọ ojuju maka Social Media?
Nkọwa nke ezi nwere ike ịdị iche na ọtụtụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịsị na ọ dabere na niche / ahịa ị nọ ma hapụ ya na nke ahụ, enwere ụfọdụ echiche bụ isi ma dị oke egwu nke metụtara ọtụtụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta:
Mezie ma bipụta ọdịnaya kachasị dị mkpa maka "UGBU A": Ndị mmadụ na-anakọta ụyọkọ njikọ ma hazie ha site na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi dị kaHootsuite ma ọ bụ Buffer. Ọ bụ ezie na nke a dị mma, gbaa mbọ hụ na ọdịnaya ị na-ekerịta abụghị naanị ihe dị mkpa kamakwa ọ dị ugbu a.
Mee ha ụtọ: Na-agwụ ike, posts ndị nwere otu akara nwere njikọ dị mkpụmkpụ agaghị adọrọ ndị na-eso ụzọ gị ntị. Na saịtị dịka Facebook na Google, tinye ihe oyiyi dị mkpa na post gị. Ihe ndị a na-eme ka ha pụta ìhè ma na-adọta uche ndị mmadụ. Ihe bụ isi nke Ntị-mmasị-mmasị-ọchịchọ emetụta ihe ị biputere na soshal midia. Echefukwala nke ikpeazụ: Ihe! Jiri oku na-eme ihe mgbe niile.
Dee ederede pụrụ iche, doro anya, dị mfe, mana magnet na nkọwa. Ọwa mmekọrịta ọ bụla nwere ọnọdụ mmadụ ma ọ bụ ụdị njikọ aka dị iche. Na Facebook, ndị mmadụ anaghị etinye aka na nkọwa (kama, "dị ka" bụ ihe dị ka ha na-aga, maka ọtụtụ posts). Na Twitter, ntinye aka nwere ike ịdị ntakịrị omimi, site na retweets na azịza. Ahụla m na obodo Google+ na-etinye aka karịa n'ebe ndị ọzọ. Mana ọ dabere n'otú ị si hazie ihe ị biputere na nke ọ bụla n'ime ọhaneze.
Ghọta na mgbasa ozi mmekọrịta abụghị naanị maka ịde njikọ: Ọ bụghị Digg, ka emechara. Not nọghị ebe ahụ iji biputere njikọ wee gaa n'ihu. Mgbalị mgbasa ozi mmekọrịta dị irè bụ ihe na-eke nkwa. Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ndị ọrụ gị n'ọrụ - mee ka ha kekọrịta, zighachi, zaghachi, kwuo ma ọ bụ bido mkparịta ụka ihe ndị ahụ na - ebute ihe na - efe efe - ị nwere ike ịsị na mbọ ndị ọrụ mmekọrịta gị kwụrụla.
Social Media bụ Mgbatị Gị / azụmahịa gị / weebụsaịtị gị
Mgbasa mgbasa ozi abụghị - na - enweghị ike - bụrụ naanị ụlọ ọrụ na - anọghị na azụmaahịa / weebụsaịtị gị. Y’oburu n’inwe webusaiti, na igbali ikwalite ya maka uzo na ntughari, ikwesiri ijide n’aka na mgbali mgbasa ozi gi n’adighi mmiri.
Site na "mgbasa ozi mgbasa ozi," Naanị m na-ekwu maka ịmepụta profaịlụ mmekọrịta na-arụsi ọrụ ike nke nwere ọtụtụ ndị na-akwado ya, ndị na-eso ụzọ, yana ihe ndị masịrị ya. Ihe m na-ekwu n'ezie bụ:
nkwenye pịa-site na udu
njikọ aka dị ndụ
ntụgharị site na ọwa mmekọrịta
ọgụgụ na okporo ụzọ
ohere dị elu nke mbak, retweets, na ihe kpatara nje virus
Brandsdị nnukwu ụdị na-eji mgbasa ozi mgbasa ozi na ROI gbawara agbawa. Ihe eji eme ngwa ngwa na-aghọ ọkwa ọzọ maka mgbasa ozi anaghị egbochi - ma maa gịnị? Ọ is na-arụ ọrụ. Na n'azụ ya niile bụ usoro atụmatụ siri ike emere maka ọwa mgbasa ozi mmekọrịta.
Banye na ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka ị nwere ike n'ihi na ọ doro anya na ọ ga-esi ike (n'eziokwu, ọ dịlarị) iji mepụta olu gị n'etiti mkpọtụ niile.
Tags: content Marketingatụmatụ ọdịnayasearch engine njikarịchaAelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketing